China Abavelisi bokulinganisa ubushushu kunye nabathengisi | UChapman
✭ Xa usenza izinto ezenziwe ngenaliti ezivela kwiiplastiki, iqondo lobushushu lokungunda linefuthe eligqibeleleyo kumgangatho wamalungu kunye nexesha lokujikeleza. Ukulawula ubushushu ngokugqibeleleyo ngexesha lokuqhubekeka kwe-thermoplastics ke ngoko kunefuthe ngqo ekusebenzeni kwemveliso.
✭ Inaliti yokubumba ityhutyha ishushu yimathiriyeli efakiweyo. Ubushushu buchithwa kukuqhutywa kobushushu kwizinto eziphathekayo nakwintsimbi yesikhunta kumphezulu wesitayile sokulawula ubushushu, apho ubushushu bunikezelwa ngokudluliswa kobushushu kuhanjiso lobushushu olujikelezayo (amanzi okanye ioyile). Iyunithi yokulawula ubushushu ichitha ubushushu bendawo yokuhambisa ubushushu kwaye ibuyisele indawo epholileyo ekujikelezeni.
✭ Iiseti zethu zokubumba zenziwe ngezinto ezilukhuni ze-S136, kwaye ubomi bomngundo kufuneka bufike kwisigidi esinye samaxesha. Kwinkqubo yokubumba yenaliti, kufuneka kuqinisekiswe ukuchaneka kwemveliso, kwaye kuqinisekiswe ukuba izinzile kwaye iqinile ngexesha lenkqubo. Yenza icandelo lethu elektroniki lizinzile.
Umngundo NO. I-CPM-181013
Inkqubo yokugqiba umphezulu VID21
Izinto zePlastiki Ikhompyuter + yeABS
Icandelo lobunzima 23g
Ubungakanani Icandelo 125.00 X 63.00 X 22.00mm
Ubukhulu zomngundo 346 X 396 X 337mm
Igama lendima Umpu wolawulo lobushushu
Umngxunya womngundo 1 + 1
Izinto zomngundo S136
Ixesha lokukhokhela 25intsuku
Ixesha Lomjikelo Womngundo: Ngama-28
Umgama: Ukusetyenziswa okuphambili kwee-thermometer ze-infrared kukulinganisa ubushushu besifundo umgama. Isixhobo siyanceda kwiimeko apho kunzima ukufikelela kwinto yokurekhoda ubushushu.
Umzekelo, i-thermometer ye-IR inokufika xa ulinganisa ubushushu beeyunithi zokungenisa umoya ezihlala zingafikeleleki. Ungasebenzisa kwakhona ithemometha ye-infrared ukubeka esweni ukusebenza kweenkqubo zokupholisa iinjinjini okanye ukubona iindawo ezinobushushu kwiinkqubo zombane kunye neepaneli ezinokufikelela okulinganiselweyo.
Yingozi: Ukulinganisa ubushushu kude kunezibonelelo zako. Ayingawo onke amaqondo obushushu anokulinganiswa ngokunxibelelana ngqo nawo. Omnye umzekelo kukwakha imililo.
Abacimi-mlilo bahlala besebenzisa ithemometha ye-IR ukuchonga iindawo ezinobushushu xa kusenzeka umlilo. Ezi zixhobo zibenza ukuba bafumane iziphumo ezichanekileyo ngaphandle kokubeka ubomi babo emngciphekweni.
Esinye isicelo se-thermometer esingadibaniyo nokubeka esweni izixhobo zorhwebo ezinje nge-boilers, iifanitshala, kunye nemibhobho yenkqubo yokushisa okuphezulu. Ngezi zixhobo ziphathwayo, abasebenzi banokujonga kakuhle umphezulu wezi nkqubo ukuba zinamaqondo aphezulu obushushu ngaphandle konxibelelwano ngqo.
Ukulinganisa ubushushu kwiindawo ezinetyhefu okanye eziyingozi kunokwenzeka ngezi zixhobo. Nangona kunjalo, ukufumana ithemometha eyi-IR elungileyo elinganiselwe imeko efanelekileyo kubalulekile ekufundeni ngokuchanekileyo kobushushu nakwezinye zezi zicelo.
Intshukumo: Iithemomitha ze-IR ikwizixhobo ezikhethiweyo zokulinganisa ubushushu bezinto ezihamba rhoqo. Kuba ezi zixhobo ziphendula kakhulu, akukho kulibaziseka ekubhaliseni umahluko kubushushu. Kananjalo, iithemomitha ze-IR zikulungele ukulinganisa amaqondo obushushu ezinto ezihamba ukusukela isantya sento esingazenzi iziphumo.
Imizekelo inokubandakanya ukulinganisa iqondo lobushushu beebhanti zokuhambisa kwindawo yokulungisa, ukuhambisa oomatshini, iiroller, kunye nezinye izinto ezihambayo apho kufuneka ubushushu.
Egqithileyo Umatshini wePOS wekhadi letyala
Okulandelayo: 34 kunye ne-4 pin connector
Ibhokisi yeepilisi yeplastiki yeentsuku eziyi-7